Mootada duulaysa ee filimka Back to the Future iyo horumarkeeda | I sii wakhti firaaqo
Gabriela moran | | cine, Filimka sheekooyinka sayniska
Xaqiiqdii waad aragtay ama, ugu yaraan, waad maqashay Saddex geesoodka filimka guulaystay Dib ugu noqo mustaqbalka. Filimkii ugu horreeyay waxaa la sii daayay 1985 wuxuuna noqday kan ugu guulaha badan sanadka. Aad bay u weynayd guusheedii oo waxaa la go'aamiyay in la sii daayo taxane afar sano ka dib iyadoo Steven Spielberg uu yahay soo saare! Waxay ahayd en filimkan labaad oo ah halka mootada duulaysa ee filimka Back to the Future 2 ka muuqato.
Saddexda filim ayaa ahaa oo uu jilayo Michael J Fox oo ah Marty McFly iyo Christopher Loyd oo ah aqoon yahan Emmet Brown. Filim kasta wuxuu dhigay jilayaasha ugu waaweyn xilliyo kala duwan mahadnaq waqtiga safarka ee DeLorian. Shaki la'aan, saddex -geesoodku wuxuu u taagnaa horumar la taaban karo gaar ahaan noocyada khayaaliga sayniska. Laakiin waxaas oo dhan, qaybtii labaad waxay abuurtay filashooyin aad u weyn oo ku saabsan mustaqbalka iyo horumarka farsamada ee jiri doona, sidaasi waa kiiska mootada ee filimka. Akhri si aad u ogaato dhammaan faahfaahinta ku saabsan aaladdan cusub iyo waxa ku cusub!
1 Mootada duulaysa ee filimka Back to the Future 2
2 Ku noqo hadda… Sanad -guuradii 30 -aad ee taxanaha ayaa la xusaa!
3 Mootada duulaysa ee filimka Back to the Future durba ma dhab baa?
4 Maxaa la filayaa hadda?
5 Mootooyinka hadda
Mootada duulaysa ee filimka Back to the Future 2
Halyeeyada waa Marty: waa da'yar 17 jir ah oo had iyo jeer ka taga hal meel ilaa meel kale oo mootadiisa ah iyo in uu sidoo kale ka mid yahay kooxda muusikada dugsiga halkaas oo uu ka ciyaaro gitaarka. Wuxuu leeyahay gabar saaxiib la ah oo la yiraahdo Jennifer saaxiibkiisna waa Emmet, waa saynisyahan ku kaxeeya safarka waqtiga oo inta badan lagu tilmaamo “Doc”.
Filimku wuxuu bilaabmayaa 1985, jilayaasha ayaa u safraya mustaqbalka 30 sano. Waxay u baahan yihiin inay dhammaystiraan hawlgal Oktoobar 21, 2015!
Ku noqoshada mustaqbalka 2 waa mid ka mid ah filimada ugu guulaha badan noocyada khiyaaliga sayniska. Saamaynta gaarka ah waxay ahayd mid cajiib ah waqtigoodii! Xaqiiqooyinka fog sida sawirada XNUMXD, baabuurta duulaysa iyo mootada uu Marty adeegsaday ayaa la sara kiciyey.
El mootada duulaysa ee filimka Back to the Future ayaa noqotay astaan taageerayaasha saddex -geesoodka. La -kulanka Marty ee hab -nololeedka noocan oo kale ah wuxuu ahaa shil, maaddaama ay ahayd hab uu ugu guulaysan jiray dagaal qayb ka mid ah qorshaha.
Ka sokow sheekada waxaan dhihi karnaa, annaga oo aan ka baqaynin inay khaldan tahay, taas waxa ugu khuseeya filimkan wuxuu ahaa aragtida ay hal -abuurayaashu ku qaabeeyeen mustaqbalka. Filimku wuxuu ka tarjumayaa jawaabta suurtagalka ah ee su'aasha weligeed ah: sidee mustaqbalka noqon doonaa waqti kadib?
Ku noqo hadda… Sanad -guuradii 30 -aad ee taxanaha ayaa la xusaa!
Mustaqbalkii ayaa na qabsaday oo sannadkii 2015 ayaa yimid! Taageerayaashu waxay sugayeen Oktoobar 21. Tani, sababta oo ah filimka labaad, taasi waxay ahayd taariikhda la tilmaamay markii imaanshaha Marty iyo Doc waqtigeenna ay dhici doonto.
Si loo xuso sannad-guurada 30-aad, waddamada qaar ayaa dib u soo saaray saddexda filim ee tiyaatarada saaran. A farriin rasmi ah oo ka timid Dhakhtar Emmet Brown si loola hadlo taageerayaasha sheekada oo hoos lagu muujiyey:
Filashadu aad bay u badnayd maadaama waxyaabo badan oo la yaab leh ay dhici karaan. Waxay ahayd fursad ay shirkaduhu si buuxda uga faa’iidaysan karaan! Noocan oo kale waa kiiska Nike, Pepsi iyo Lexus. Shirkadan baabuurta ee ugu dambaysay waxay soo bandhigtay tusaalaha koowaad ee la barbar dhigi karo mootada duulaysa ee caanka ah ee filimka Back to the Future 2.
Mootada duulaysa ee filimka Back to the Future durba ma dhab baa?
Dhowr shirkadood ayaa soo saaray tusaalooyin si ay u gaaraan tusaalaha u shaqeeya sida mootada filimku sameeyay. Lexus, sumadda baabuurka caanka ah ayaa ka mid ah
Slide waa magaca Lexus ee mootada duulaysa oo dul sabaynaysa hawada oo dul mari karta dusha sare! Qalabku wuxuu adeegsadaa farsamada hadda jirta: levitation magnetic. Taasi waa sababta, nasiibdarro, kama shaqeyso dusha sare, taas oo ah, waxay ku dul socon kartaa oo keliya tareennada leh birlabyo gaar ah.
Mootada Slide -ku waxay ku shaqaysaa nitrogen dareere ahaan shidaal ahaan, marka la barbardhigo. Markaa marka mootadu kululaato, waxay lumisaa levitation waxayna u baahan tahay in lagu buuxiyo nitrogen. Celceliska isticmaalka mootadan duulaysa waa qiyaastii 20 daqiiqo. Lexus ayaa laga dhisay Cubelles, oo ku taal meel u dhow Barcelona, ​​waddo gaar ah si loo tijaabiyo.
Mootadan duulaysa Maaha iibkeeda, hadda waa tusaalaha uun. Ugu dambayntii, summaddu waxay ka faa’iidaysatay horumarinta farsamada ee Slide -ka iyo Sannad -guurada Dib -u -noqoshada Mustaqbalka si ay ugu adeegsato xayaysiinta baabuurta.
Maxaa la filayaa hadda?
Shirkaduhu waxay sii wadaan cilmi-baarista iyo maalgelinta helitaanka tikniyoolajiyadda lagama maarmaanka u ah inay ka soo kaxeeyaan mootada duulaysa ee muddada dheer la sugayay filimka Back to the Future.
Hendo waa shirkad dhowr sano bilowday mashruuca mootada duulaysa oo laga ganacsan karo. In kasta oo Hendo Hoverboard -ku uusan adeegsan nitrogen dareere ah, haddana waxay leedahay xaddidaad adeegsi oo ku aaddan bilowgeeda.
Hendo wuxuu adeegsaday uruurinta wadareed oo soo saaray lacag aad u xiiso badan. Maxaa ka sii badan waxay iibisay qaar ka mid ah tusaalooyin qiimihiisu yahay 10 kun oo doollarka Mareykanka ah oo mootadiiba ah!
Waad ku mahadsan tahay shaqada cilmi baarista iyo horumarinta, Hendo wuxuu soo saaray dhowr tusaalooyin oo uu kaamil noqday. Waxaan ku tusaa sawirka soo socda:
Saddex -geesoodka ayaa la sii daayay 80 -meeyadii, xilligaas oo uu mootadu si gaar ah caan ugu ahaa hab gaadiid iyo madadaalo. Qofna ma qiyaasi karo suurtagalnimada helitaanka mid duulay! Dhab ahaantii qaybtii labaad ee saddex -geesoodku waxay kor u qaadday filashooyinka maskaxda daawadayaasha. Qaar ka mid ah ayaa durbaba qayb ka ah nolol maalmeedkeenna kuwa kalena waa ay gaaban yihiin.
Waxa dhabta ka dhigaya waa taas Hadafka shirkado badan ayaa ah in la bilaabo mootada duuleysa oo leh shaqooyin la mid ah kuwa uu isticmaalay Marty McFly.
Hadda waxaan haysannaa qalab iib ah kuwaas oo aad u caan baxay: waxaan ula jeedaa mootooyinka korontada iyo in ay ku dhiiradeen farshaxanka filimka.
Waa xaqiiqo in aan isku soo dhawaaneyno! Waxay u muuqataa in yaabku uu dhakhso u imaan karo sidii la filayay ...
Wadada buuxda ee maqaalka: I sii wakhti firaaqo » cine » La kulan mootada duulaysa ee Back to the Future